को हुन् ग्रिनकाडै पाउने गरी नोभेम्बरमा भिसा पाउने ५६६ नेपाली ? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
को हुन् ग्रिनकाडै पाउने गरी नोभेम्बरमा भिसा पाउने ५६६ नेपाली ?
नोभेम्बर महिनामा ५६६ जना नेपालीहरुले अमेरिका आउनासाथ ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्नेगरी आप्रवासी भिसा प्राप्त गरेका छन् । उनीहरु १९ वटा श्रेणीमा अमेरिकाको आप्रवासी भिसा प्राप्त गर्नेहरु हुन् । अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालय, ब्यूरो अफ कन्सुलर अफेयर्सले उनीहरुको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
अमेरिकी नागरिकता पाइसकेका व्यक्तिको श्रीमान् वा श्रीमतिका रुपमा ४८ जना नेपालीहरुले नोभेम्बरमा भिसा पाए भने अमेरिकी नागरिकतापाएका व्यक्तिका छोराछोरी १ जनाले भिसा पाए । डिभी लोटरी परेका १४७, उनीहरुका दम्पत्ति ७७ र ४४ जना छोराछोरीहरुले पनि नोभेम्बरमा नै भिसा पाए । त्यस्तै दक्ष कामदारका रुपमा १ जना, उनका दम्पत्ति १ जना र छोराछोरी २ जनाले पनि नोभेम्बरमा भिसा पाएर अमेरिका आएका छन् ।
त्यस्तै अन्य कामदारका रुपमा पनि १ जना नेपालीले नोभेम्बरमा आप्रवासी भिसा पाएका छन् । अमेरिकी नागरिकका अविवाहित नेपाली छोराछोरीका रुपमा २ जना, एफ ११ भिसावाहकका बच्चाबच्ची १ जना, अमेरिकी ग्रिनकार्ड पाएकाका नेपाली दम्पत्ति ३० जना र उनीहरुका २१ बर्ष नपुगेका छोराछोरी १७ जनाले पनि नोभेम्बरमा भिसा पाए ।
त्यस्तै गिनकार्ड होल्डरका अविवाहित नेपाली छोराछोरी ३ जना, अमेरिकी नागरिकताप्राप्त व्यक्तिका दाजुभाई दिदीबहिनीका छोराछोरी १ जना नेपालीले नोभेम्बरमा अमेरिकाको भिसा पाए । अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरिसकेका २१ बर्ष नाघेका व्यक्तिका ५० जना नेपाली बुबाआमाले पनि नोभेम्बरमा भिसा पाए ।